Waaxda Maaliyadda Mareykanku Waa Inay Siisaa Congresska Canshuur Celinta Trump – Heemaal News Network
Waaxda Maaliyadda Mareykanku Waa Inay Siisaa Congresska Canshuur Celinta Trump
Waaxda Caddaaladda ee SA ayaa weydiisatay waaxda maaliyaddu inay ku wareejiso Congress -ka canshuur -celinta Donald Trump.
Sanadihii la soo dhaafay, Trump wuxuu ka dagaallamay dhinacyo badan si uu awood ugu yeesho inuu ka difaaco saamiyada dakhligiisa dhammaan hay’adaha dowladda. Dadka codsaday in la ogaado waxaa ka mid ah guddi ka tirsan Golaha Wakiillada oo hadda ay ansixisay Wasaaradda Caddaaladdu.
Markii Trump uu madaxweynaha ahaa, Xoghayihii Maaliyadda ee xilligaas Steven Mnuchin wuxuu diiday inuu la wadaago canshuur celinta sababta oo ah wuxuu u malaynayay inay Dimuqraadiyiintu doonayeen inay u arkaan sababo xisbi-siyaasadeed.
Guddigu wuxuu aaday maxkamad, si ay fursad ugu heli karaan in ay arkaan lix sanno oo canshuur celin ah, si baaritaan hufan loogu sameeyo, haddii uu u dhaqmay si waafaqsan sharciga canshuurta.
Guddiga ayaa gudbiyay dacwad si ay fursad ugu helaan lix sano oo canshuur celin ah waxayna tilmaameen in looga baahan yahay baaritaan ku saabsan in Trump uu u dhaqmay si waafaqsan sharciga canshuurta.
Sida laga soo xigtay xukun maxkamadeed bishii Janaayo, Trump wuxuu haystaa 72 saacadood si uu uga gaashaanto go’aankan, ka dib markii maamulka Joe Biden si rasmi ah u beddelay qiimeynta dowladda ee kiiska.
Bishii Febraayo, dacwad oogaha New York ayaa galaangal u yeeshay warbixinnada canshuuraha ee Trump ka dib go’aankii Maxkamadda Sare ee la xiriiray baaritaan dembi oo socda.
Dukumiintiyada waxaa laga ilaaliyaa dadweynaha. Haddii canshuur celinta lagu wareejiyo guddiga shirweynaha, waxay u badan tahay in nuxurka la shaacin doono.
Tan iyo Richard Nixon, dhammaan madaxweynayaasha Mareykanka ayaa daabacay canshuur celintoodii.
Israil Oo Eedaysay Iiraan
Olole ka Bilowday Dowlad deegaanka Somalida Itoobiya.(Sawirro)
Tartanka Ciyaaraha Kubada Ee Gobolada Puntland Oo Galabta lasoo Gebagebeeyey.(Sawiro)
Madaxweyne Biixi Oo Ka Hadlay Doorashada Shir Gudoonka.
Safaarada Dowlada Kenya Ee Muqdisho Oo Dib loo Furay (Sawiro)